Wiilkii Uu Dunida Kaga Tegay Feedhyahankii Muslimka Ahaa Ee Mohamed Ali Oo Qarka U Saaran Inuu Dawarsado Ama Tuugsado Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(16-12-2018) Wiilka kaliya ee uu dhalay feedhyahankii Muslimka ahaa ee Muhammad Ali ayaa ku sugan xaalad nololeed oo aad u adag, waxaana uu qabtaa shaqooyin adag oo uu ka helo wax aan xattaa u goynaynin cuntadiisa saddexda waqti.
Muhammad Ali Junior waa wiilka kaliya ee marka dhinaca wiilasha laga hadlayo uu dhalay feedhyahankii sannado ka hor xaqu u yimid ee Muhammad Ali, waxaase jira toddoba hablood oo ay kala hooyo yihiin iyo hal wiil oo uu soo korsaday feedhyahanku.
Wiilkan lagu magacaabo Muhammad Ali Junior waxa uu rajaynayay inuu helo adduun lacageed oo dhan 4 milyan oo Gini oo dhaxal ah markii uu abbihii dhintay sannadkii 2016 iyadoo ay da’diisu ahayd 74 jir, laakiin halkii uu ka filayey in lacagtaas la siiyo ayaa lagu wargeliyey in kaliya uu bishii helayo lacag yar oo aan waxba u goynaynin.
Ali ayaa sheegay inuu qabto shaqo uu maalintii ka helo 6 Gini oo kaliya, taas oo marka la eego waxa ay ka goynayso dalka Maraykanka noqonaysa koob shaah ah amaba ka yar.
“Kaliya waxa aan isku dayayaa inaan noolaado.” Sidaas waxa yidhi Muhammad Ali Junior oo xog qiiro leh la wadaagay dunida iyo dadkii taageeri jiray aabbihii.
“Wax walba waan qabaa – waxbaan dhisaa, shubka ayaan jabiyaa, guryaha ayaan ranjiyeeyaa, laakiin waqtigan waxba ma sameeyo. Doogga ayaan guraa, gaadhig gacan ayaan jiidaa, kaaryoone ayaan riixaa, daaqadaha ayaan nadiifiyaa, guryaha ayaan masaxaa. Saaxiibkay ayaa ii ogolaaday inaan isticmaalo alaabtiisa, wixii aan soo helana qaybtiisa ayuu qaataa.” Ayuu Muhammad Ali Junior u yidhi si qiiro leh.
Ninkan oo ay da’diisu tahay 46 jir waxa uu deggan yahay cooshad ku taalla Miami oo ka kooban saddex qol, laakiin xaaskiisa Shaakira oo 49 jir ah iyo laba carruur ah oo ay isku dhaleen ayaa ku nool Englewood, Chicago, laakiin dhibaatada haysata ayaa ah in deegaankaasi yahay ka ugu xun ee dilalka, dhaca iyo boobku ka dhacaan dalka Maraykanka.
Sannadkii 2016, Shaakira ayaa waraysi lala yeeshay waxay ku sheegtay in Ali uu iskaga cararay iyada iyo carruurteedaba oo uu u guuray Florida si uu shaqo u helo, laakiin Junior ayaa sheegay in aanu dhibaato uga tegin carruurtiisa iyo xaaskiisa balse uu doonayey inuu ku dhawaado hooyadii Khalilah oo ah xaaskii ugu horreeyey ee aabbihii Muhammad Ali si uu u caawiyo, ulana shaqaysto balse haddana ay isfahmi waayeen.
Waxa uu rajaynayey in hanti dhan £50million oo uu aabbihii dunida kaga tegay la qaybiyo, laakiin waxa adduunkaas oo dhan gacanta ku dhigtay xaaskiisii u dambaysay ee Lonnie oo haysay illaa markii uu dhimanayey iyo toddoba hablood oo ay u dhashay iyo weliba wiil uu soo korsaday oo lagu magacaabo Assad, kuwaas oo ku raaxaysta hantidaas.
Filashada dhaxalka ee Muhammad Ali Junior waxa caqabad ku noqotay gabadha uu aabbihii qabay ee Lonnie oo ay da’deedu tahay 61 jir, taas oo ahayd qareen awood badan oo ka hor intii aanu saygeedu dhimanin ka saxeexatay hantida, halka wiilkana loo ogolaaday wax aan ka badnayn 1000 (kun) dollar oo bishii loo diro.
Markay ay lacagta 1000 dollar ah soo gaadho, waxa uu 560 ka mid ah ku bixiyaa kirada guriga uu ku jiro, inta yar ee soo hadhayna waxa uu ka dhigtaa nolol maalmeed aan soconin wax ka badan hal usbuuc.
Ma laha akown xisaabeed oo bandhiga uga furan oo lacagta loogu shubo, sidaas daraadeedna marka lacagtu soo gaadho waxa laga goostaa khidmad, marka uu iska bixiyo kiradana waxa qiyaas ahaan maalintii usoo hadhay £5.70 Gini.
Hadda waxa uu Junior raadinayaa lacag yar oo uu u diro carruurtiisii amaba tigidh uu ku raaco diyaarad dib ugu celisa halka ay deggan yihiin, maadaama noloshu ku adagtahay.
“In badan baan u xiisay carruurtaydii. Xaaskaygu waxay igu tidhi anigaa dabbaraya ee inoosoo qaad malaayiin (qaybta uu ka helayey dhaxalka), laakiin qalad ayay ahayd. Inkasta oo aan xaq u lahaa haddana waxba kama hayo, waxaanan jeclaan lahaa inaan lacag u diro carruurtii iyo gurigii amaba aan helo duulimaad aan ku tago Chicago” Ayuu yidhi.
Junior waxa uu aaminsan yahay in eheladiisa iyo qaraabadiisu ay helaan lacago badan laakiin aanu garanayn meel ay joogaan maadaama aanu wax xidhiidh ah la samaynin in ka badan laba sannadood.
“Waxa aan dareemaa sidii aan burburay laakiin waan la qabsaday. Maxaa kale ee aan samayn lahaa?
“Waxa aan isku dayaa inaan lacag ka badan ka helo hantidii aabbahay laakiin ma heli karayo. Waxay igu yidhaahdaan, ‘Waxaanu ku siin doonaa marka aad u baahato’. Markii iigu dambaysay ee aan weydiistay inay ii kordhiyaan waxay iga jareen boqol.” ayuu mar kale yidhi.
Muhammad Ali Junior waxa uu dalbaday in faahfaahin laga siiyo hantida aabbihii ka tegay iyo sababta loogu daawanayo dhibaatada nololeed ee uu ku jiro, taas oo xattaa kala geysay isaga iyo ubadkiisii.